प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Jesson झण्डा कला र शिल्प कं, लिमिटेड
के तपाइँ कुनै ग्राहकको जानकारी कुनै पनि बाहिरका पार्टीहरूमा खुलासा गर्नुहुनेछ?
कहिले पनि हुँदैन। हामी बुझ्दछौं कि प्रत्येक ग्राहकको लागि कसरी व्यापारको जानकारी महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि लोगो, पाठ वा अन्य निजी जानकारी कडाईका साथ गोप्य हुन्छन्। हामी सबै कानुनी र नैतिक रूपमा संचालन।
तपाईको ग्राहक सेवा समय के हो?
हाम्रो समर्थन स्टाफ दिनको २ hours घण्टा, हप्ताको days दिन उपलब्ध छ। तिनीहरू स्काईप वा ईमेल द्वारा पुग्न सकिन्छ।
के म कुनै पनि समयमा मेरो अर्डर अनलाइन राख्न सक्छु?
हो, अनलाइन अर्डरहरू दिनको २ hours घण्टा राख्न सकिन्छ।
के म ती उत्पादनहरू प्राप्त गरिसकेपछि मैले आदेश प्राप्त गर्न सक्छु?
चीन फ्ल्याग-निर्माताहरु यसको अनुकूल प्रकृति को कारण मुद्रित ग्राफिक्स मा रिटर्न स्वीकार गर्न असमर्थ छ।
यदि तपाईं आफ्नो खरीद संग संतुष्ट हुनुहुन्न भने, कृपया तपाईंको ग्राहक प्राप्त गर्न को लागी7दिन भित्र तपाईंको ग्राहक सेवा प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र हाम्रो विवेकमा हामी तपाईंको लागि उचित सुधार गर्नेछौं।
यदि तपाइँ मुद्रण ग्राफिक्स मा सानो वा धोउन योग्य smudges वा प्रदर्शन असर सक्छ कि सिलाई समस्याहरु छन् भने, चीन फ्ल्याग-निर्माता तपाईलाई यस अर्डर को लागी २०% छुट छुट प्रदान गर्न चाहन्छ, जुन तपाईको अर्को अर्डरको लागि भुक्तान गर्न सकिन्छ, कुनै न्यूनतम खर्च सीमा।
चीन-झण्डा-निर्माताहरूले कुन प्रकारका फाइलहरू स्वीकार गर्छन्?
एआई र पीडीएफ दुई स्वरूपहरू हुन् जुन प्राय: हाम्रो कारखानामा मुद्रणको लागि प्रयोग गरिन्छ। र अन्य फाईल स्वरूपहरू स्वीकार्य छन्, तर ग्राफिकको मापन अन्य ढाँचाहरूको लागि १: १ हुनुपर्दछ।
के तपाईं प्रिन्टि color र my्ग मेरो कलाकृतिमा उस्तै छ भनेर निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ?
सबै RGB फाईलहरू मुद्रण गर्दा CMYK मा रूपान्तरण हुनेछ। यस रूपान्तरणले हल्का र difference्ग फरक गर्न सक्दछ, जसले अन्तिम मुद्रण प्रभावमा प्रभाव पार्दछ। रंग भिन्नता लाई कम गर्न, हामी तपाईको कलाकृतिको र color्ग मानक प्यानटोन सी कार्डको साथ जाँच्दछौं, त्यसैले कृपया तपाइँको आर्टवर्क बुझाउँदा तपाइँको प्यान्टोन र specify निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
मलाई मेरो आर्ट फाईल तयार हुनको लागि अलि बढि मद्दत चाहिन्छ। के तपाइँसँग जाँच गर्न आर्टवर्क निर्दिष्टीकरणहरू छन्?
हो, क्लिक गर्नुहोस् आर्टवर्क विशिष्टताहरु को लागी अधिक ग्राफिक विनिर्देशहरु को लागी। यदि तपाईंलाई थप मद्दतको आवश्यकता छ भने, तपाईं हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
म कसरी आर्टवर्क डिजाइन सेवा अनुरोध गर्दछु?
हाम्रो कलाकृति डिजाइन सेवा को उपयोग गर्न, पहिले, तपाईं किन्न चाहानु भएको उत्पादन छनौट गर्नुहोस्। उत्पाद पृष्ठमा, कलाकृति डिजाइन क्लिक गर्नुहोस्। र तपाइँको आवश्यकता अनुसार एक प्रकारको कलाकृति सेवा छनौट गर्नुहोस्।
अर्डर र शिपिंग मद्दत
तपाईं कस्तो किसिमको शिपिंग विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ?
आदेश विश्वसनीय तुरून्त र सुरक्षित रूपमा तपाईं पुग्न सुनिश्चित गर्न हामी विश्वसनीय र व्यावसायिक शिपिंग सेवा प्रस्ताव गर्दछौं। फेडएक्स र यूपीएस तपाईको अर्डर शिपिंग गर्दा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ, र यदि तपाईलाई अन्य शिपिंग विधिहरू सहित शिप गर्न आवश्यक छ भने कृपया ग्राहक सेवाका लागि हाम्रो प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।
के म शिपिंग ठेगाना अपडेट गर्न सक्छु?
हो, तपाईं आफ्नो शिपिंग अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ वा एक आदेश परिवर्तन गर्न को लागी एक दिन अघि अर्डर पठाउन अनुसूचित हुन। कृपया हामीलाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस् र हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधिले यस परिवर्तनलाई मद्दत र पुष्टि गर्नेछ।
प्याकेजमा केहि आईटमहरू फेला नपरेमा मैले के गर्ने?
पहिलो, जाँच गर्नुहोस् कि अर्डर पठाइयो र पूर्ण डेलिभर भयो। तपाईंको अर्डर बहु ​​बक्सहरूमा पठाउन सकिन्छ, त्यसैले सबै प्याकेजहरू डेलिभर भएको कुरा निश्चित गर्नुहोस्। यदि सबै बक्सहरू प्राप्त भएको छ भने, प्याकिंग स्लिप ध्यानपूर्वक समीक्षा गर्नुहोस् र तपाईंको प्याकेजहरूको सामग्रीहरू निरीक्षण गर्नुहोस्। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंको अर्डर हराएको वस्तु वा अंशहरूको साथ डेलिभर गरिएको थियो।
सामान्यतया, हामी हाम्रो कस्टम उत्पादनहरूको लागि १-दिन, २-दिन,--दिन र--दिनको नेतृत्व समय (* कलाकृति अनुमोदन पछि) प्रस्ताव गर्दछौं, शिपिंगका लागि २- business व्यापार दिनहरू जुन तपाईंको रसद विकल्पहरूमा निर्भर गर्दछ। अधिक शिपिंग विवरणहरूको लागि, कृपया शिपिंग र डेलिभरी हेर्नुहोस्
मेरो प्याकेज भन्सार द्वारा निरीक्षण गरिएको छ भने के हुन्छ?
सीमा शुल्क निरीक्षण सामान्यतया एक नियमित निरीक्षण हो। यदि वस्तुहरू ब्रान्ड प्रतिलिपि अधिकारमा संलग्न छन् भने, तपाईंलाई ब्राण्ड लेटर अफ आधिकारिकता प्रदान गर्न आवश्यक छ र सामानहरू भन्सार द्वारा जाँच गर्नुपर्नेछ। यदि त्यहाँ भन्सार डेटा र वस्तुहरूको वास्तविक संख्या बीच भिन्नता छ, तपाईं जानकारी प्रदान गर्नु पर्छ वा रिपोर्ट लेख्नु पर्छ।